China Industrial akwa Manufacture na Factory | Jiashun
Mixed silicone teepu
Ihe mkpuchi eletrọniki
Glass fiber bụ ụdị inorganic na-abụghị nke ọla nwere ezigbo arụmọrụ. O nwere ọtụtụ uru dị iche iche, dịka mkpuchi dị mma, nguzogide ọkụ siri ike, nguzogide corrosion dị elu na ike dị elu dị elu, mana ọghọm ya na-emebi ma na-ada nkwụsi ike. A na-ejikarị eriri iko eme ihe dị ka ihe nkwado na ihe ndị mejupụtara, ihe mkpuchi eletriki na ihe mkpuchi mkpuchi ihe, bọọdụ sekit na mpaghara ndị ọzọ nke akụ na ụba mba.
The agha na weft yarns na-yiri ndokwa na ewepụghị udi, na edo erughị ala, elu njupụta nke eriri ndokwa, adịghị mfe deform, mfe iji rụọ ọrụ, ezi nkiri n'ịnọgide onwunwe na elu n'ibu ike.
Mgbu ọkụ na-ekpo ọkụ, mgbochi ọkụ, ọkụ ọkụ. Mgbe ire ọkụ na-ere ihe ahụ, ọ nwere ike ịmị ọkụ ọkụ, gbochie ire ọkụ site na-agafe ma kewapụ ikuku. A na-ejikarị usoro ntinye aka na ụgbọ mmiri, ebe nchekwa, ụlọ elu dị jụụ, ụgbọ mmiri, ụgbọ, tank na na: 7518 3732 3784 3786 3788 666 255
Q1: you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe? Ebee ka i no?
A: anyị bụ ndị nrụpụta. nke dị na Jiangsu, nke dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri shanghai.
Q2: Gịnị bụ MOQ?
A: Emekarị 1 Ton, ma obere iji nwekwara ike-anabata.
Q3: ngwugwu & Mbupu.
A: Nkịtị ngwugwu: katọn (Ọ dị na ọnụ ọnụahịa)
Ngwugwu Pụrụ iche: ọ dị mkpa iji kwụọ ụgwọ dịka ọnọdụ ahụ si dị.
Nkịtị mbupu: gị nominated Ibu ibufe ebugharị.
Q4: Olee mgbe m nwere ike ịnye?
A: Anyị na-aguputa n'ime 24 awa mgbe anyị nwetara gị ase. Ọ bụrụ na ị bụ ihe dị oke mkpa iji nweta ọnụahịa pls kpọọ anyị ma ọ bụ gwa anyị na email gị, ka anyị wee zaghachi gị ihe kacha mkpa.
Q5: Etu esi akwụ ụgwọ nlele?
A: Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe nlele site na ngwaahịa anyị, anyị nwere ike ịnye gị n'efu, mana ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ụgwọ. .
Q6: Gịnị bụ oge nnyefe gị maka nrụpụta?
A: Ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa, nwere ike nnyefe na ụbọchị 7; ọ bụrụ na enweghị ngwaahịa, chọrọ ụbọchị 7 ~ 15!
Nke gara aga: Ihe mkpuchi eletrọniki
Osote: Pu ntekwasa akwa